देश Archives - नमस्ते खबर
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुगेपछि… विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुग्दा परिवारजनमा हर्षको सीमा नै रहेन, पुर्नजन्म पाएको झै भएको भाग्यमानी दिनेशको कथन काठमाडौं । यूएस बंगलाको विमान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार दुर्घटना हुँदा धेरै जीवनले यो जगत त्याग्नु प¥यो । परिवारमा पीडाको पहाड खस्यो । अनि खुसी दैवले खोसेर लग्यो । तर, त्यहि दैवले कसैको जीवनमा पुनःजन्मको अध्याय पनि सुरु गरिदियो । विनिता हुमागाई । उमेर २७ वर्ष । काठमाडौंको शान्तिनगर बस्ने २ छोराकी आमा हुन् उनी । यतिबेला उनमा उत्साहको…
डा. बालकृष्ण थापाः देशले गुमायो एक होनहार न्यूरो सर्जन २९ फागुन, काठमाडौं । एक साता अघि भरतपुरको एलाइभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका बुटवलका पिताम्वर सापकोटाको टाउकोमा रगत जमेको छ । सोमबार राति ८ बजे अप्रेशन गर्ने तय भएको थियो । डा. बालकृष्ण थापा सोमबारसम्म चितवन आइपुग्ने र राति अप्रेशन गर्ने तयारी थियो । तर, अफसोच डा. थापा आएनन् । बेड नम्बर ३१२ मा भेटिएका ७४ वर्षीय सापकोटा भन्छन्, ‘हिजो मेरो अप्रेशन गर्ने कुरा थियो तर, डाक्टर सा’ब त भगवानको अप्रेशन गर्न जानुभएछ ।’ डा. थापा न्यूरो सम्वन्धी सम्मेलनमा…
एकाबिहानै ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारी भेटेपछि तरंगीत बन्यो राजनीति
February 15, 2018 joes_limbu joes_limbu
एकाबिहानै ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारी भेटेपछि तरंगीत बन्यो राजनीति काठमाण्डौ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गरेका छन् ।भेटमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि दावी प्रस्तुत गरेको बताइएको छ । शितलनिवासमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बाम गठबन्धनको बहुमत पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको दावी प्रस्तुत गर्नुभएको हो । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा वामपन्थी गठवन्धनको करिब दुई तिहाइ संख्या रहेको छ । बाम गठबन्धनको दावीपछि राष्ट्रपतिले बिहीबारै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा घुम्न र बिहे गर्न नमान्दा युवतीको अपहरण पछि बलात्कार !
‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा घुम्न र बिहे गर्न नमान्दा युवतीको अपहरण पछि बलात्कार ! २ फागुन, काभ्रे । प्रणय दिवसमा बिहे गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि काभ्रेमा एक युवतीको अपरहणपछि बलात्कार भएको छ । ‘भ्यालेन्टाइन डे’ को अघिल्लो दिन घुम्न जाने र विवाह गर्न गरेकाे प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार गरेपछि भकुण्डेबेसीबाट अपहरणमा परेकी युवतीको प्रहरीले बुधबार विहान पनौतीबाट उद्धार गरेको छ । उनले भनिन् , मैले मानिनँ’ पीडित युवतीले प्रहरीलाई भनिन्, ‘त्यसपछि मलाई जवरजस्ती भकुन्डेबाट अपहरण गरेर खै कता लगे, थाहा छैन, बिहान ८ बजेतिर प्रहरी चौकी पनौतीले मलाई उद्धार गर्‍यो ।’ अपहरणमा…